Olee otú anyị na ezi n'anya Of Chineke? — njem Lee - Official Site
Olee otú anyị ezi n'anya Chineke? Ọ bụ n'ezie na otu ùgwù nke Kraịst bụ onye mmehie. N'ihi na ọ ẹkekerede ke ido anyị ebe, ka o wee bụrụ onye omempụ na anyị ụlọ, na e nwere ike si mesoo dị ka onye mmehie, ọ bụghị n'ihi na ya onwe ya mmejọ, ma n'ihi na ndị ọzọ, ebe ọ bụ dị ọcha na e gbochiri ya bụla kpatara, na ike ịtachi obi ǹtàràmahụhụ ahụ bụ n'ihi anyị- ghara onwe ya. Ọ bụ na n'otu ụzọ, n'ezie, na anyị bụ now ezi omume na ya- bụghị na nkwanye ùgwù nke anyị na-ejere afọ ojuju na ikpe ziri ezi nke Chineke site n'olu nke onwe ayi, kama n'ihi na anyị na-ekpe ikpe nke dị n'ime Kraịst ezi omume, nke anyị na-etinye on site n'okwukwe, ka ọ we ghọọ nke anyị.
-Agụ nke a ji nwayọọ nwayọọ na ka ọ na-imi na! M wee gafee na nke a see okwu mgbe na-akwadebe maka m ozi on 2 Ndị Kọrịnt 5:18-21 n'ihi na Campus Outreach National Conference. ezi stof
Mary Gayle • August 19, 2013 na 8:09 Abụ • zaghachi
Ị na-eji okwu ahụ “ewepu,” gbasara mmehie, (site na ọtụtụ akwụkwọ ọkọwa okwu’ pụtara) nye ọdịdị ahụ Jizọs “apụrụghị ya” site na mmehie (ya bu. dị ka anyị dị / ga-abụ n'ihi na anyị chọrọ ya) … n'ihi na O ji ọchịchọ obi emeghị mmehie, site n’omume nke uche Ya na n’ihi ịhụnanya o nwere n’ebe anyị nọ? Ọ dị m ka, ka ewepụrụ ihe O mere. (Ọ dịghị mkpa ka a gụpụ ya na mmehie, ka anyị na-eme.)